I-DuckDuckGo iceba ukuphehlelela isikhangeli esizimeleyo seMac | Ndisuka kuMac
Kuyinyani ukuba iSafari yenye yezona bhrawuza zibalaseleyo phaya. Kodwa ngaphezu kwayo yonke into, i-symbiosis ekhoyo phakathi kwesicelo kunye ne-Mac hardware iyamangalisa. Zidalelwe omnye komnye. Ikwayenye yezona zikhangeli zikhuselekileyo ezikhoyo kunye nezo zigcina ubumfihlo babasebenzisi. Kodwa ukuba ufuna ukuya inyathelo eliya phambili ungakhetha iDuckDuckGo kwaye ngoku kwixesha elizayo elingekude kakhulu, isikhangeli sizakuzimela.
I-DuckDuckGo isebenza kwisikhangeli sedesktop esizimeleyo esinokhuseleko oluphezulu lwabucala. Iza kufumaneka kumaqonga eMac kunye neekhompyuter ezinenkqubo yokusebenza yeWindows.
Inkampani yabhengeza kwisithuba blog ngoLwesibini ukuba umkhangeli zincwadi iya kuba yodwa ngakumbi ukongeza ngokukhawuleza, kulula kwaye kukhuselekile ngakumbi kunomzekelo kaGoogle Chrome.
Isikhangeli siya kuphinda sichaze ulindelo lwabasebenzisi kubumfihlo bemihla ngemihla kwi-Intanethi. Lahla useto lwabucala lomntu ngamnye ngenxa yendlela evumela ukhuseleko lwabucala ngokuzenzekela kukhangelo, i-imeyile, kunye nokukhangela ngokubanzi.
Ayingomkhangeli zincwadi wabucala. yi app navigation yonke imihla ehlonipha ubumfihlo bakho kuba akukho xesha libi lokuthintela iinkampani ekuhloleni uphendlo lwakho kunye nembali yokukhangela.
Eyona nto ibalulekileyo ngale software intsha kukuba Isiseko seChromium asisasetyenziswa okanye esinye isiseko sekhowudi yomntu wesithathu, inkampani ithi yakha inguqulelo yedesktop yesikhangeli sayo kwi-injini yonikezelo ebonelelwa yinkqubo yokusebenza.
Ukuba ufuna ukwazi iinkcukacha ezithe vetshe malunga nalo mkhangeli zincwadi siza kuba nawo kungekudala phakathi kwethu kwaye oko iyakulingana njengeglavu kwiiMacs zethu, ungabonisana Ibhlog yeDuckDuckGo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Ezinye iiNkqubo zeMac » I-DuckDuckGo iceba ukuphehlelela isikhangeli esizimeleyo seMac